Atmaram Sharma | Nepali Stories
Atmaram Sharma – Bighatit Sapana
आत्माराम शर्मा – विघटित सपना
(मधुपर्क बैशाख, २०६७)
उसले बलिन्द्रधारा आँसु झार्यो० ।
धेरैको मुखबाट मैले सुनेको थिएँ- ‘मनको पीडा पखाल्न मानिसलाई रून दिनुपर्छ । मनमा थेगि्रएर रहेका वेदना र उकुसमुकुस आँसुले पखाल्छ । आफ्नो आँसुले आफ्नै पीडालाई पखालेपछि मान्छेको मन हलुङ्गो हुन्छ ।’
ऊ निकै समयसम्म घुँक्कघुँक्क गरेर रोइरहृयो । मैले टुलुटुलु हेर्दै उसलाई सुमसुम्याई रहेँ । उसका आँखाबाट साउनको झरीजस्तै आँसु बर्सिरहेका थिए ।
“मलाई माफ गर्नुहोस् अङ्कल ! तपाइँलाई देख्ने बित्तिक्कै बुबाको सम्झनाले सतायो र एक्कासि मन भक्कानियो ।” उसले आफू रूनुको कारण प्रस्ट्याउँदै भन्यो । बाबु समीर ! छोरा मान्छे भएर आफूलाई कमजोर बनाउनु हँुदैन । जे नहुनु थियो त्यो भइसक्यो । अब पीर गरेर के फाइदा ? तिमी पनि २०/२२ वर्षको लक्का जवान भइसक्यौ, आफूलाई सम्हाल बाबु ! सम्हाल । बोल्दाबोल्दै मेरो गला अवरुद्व भयो र आँखा रसाए । मैले भन्न खोजेको कुरा घाँटीमा अड्कियो ।
अचानक बदलिएको मेरो भावुकतालाई देखेर नै हुनुपर्छ उसका आँखामा पुनः आँसु टल्पलाए । मैले सम्झाउन खोज्दा समीर सम्हालिई सकेको थियो । मत्थर भइसकेको वातावरण फेरि भावुकतामा बहकिएकोले आफूलाई सम्हाल्दै उसलाई प्रश्न गरेँ-
समीर तिम्रो पढाइ कहाँ पुग्यो ?
पकेटबाट रुमाल निकालेर आँसु पुछ्दै उसले भन्यो- बी.बी.एस. दोस्रो वर्ष सकियो ।
तिम्रो आमाको हालखबर के छ ? व्यापार गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ हो ? गम्भीर परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै मैले पुनः प्रश्न गरेँ ।
“उपत्यकाको काँठबाट मौसमअनुसारको तरकारी साग, फर्सीको मुन्टा, हरिया मकै, ल्याएर बजारमा बिक्री गर्नुहुन्छ । धपेडीले होला आजभोलि उहाँको स्वास्थ्य धेरै बिगि्रएको छ । दुब्लाएर ख्याउटी हुनु भएको छ” । एकै सासमा समीरले आˆनी आमाको बारेमा बतायो ।
छोरीले हामी दुवैलाई टेबुलमा चिया राखिदिइन् । मैले हातमा चिया समाउँदै समीरलाई पनि चिया पिउन भनेे । उसले टेबुलबाट चियाको कप उठाउँदै मेरी कान्छी छोरीले एस.एल. सी. मा डिष्टीङ्सन ल्याएकोमा छोरी र मलाई बधाइदियो ।
बाबु समीर के कति कामले यो साँझमा आयौ ? वातावरणलाई सहज बनाउँदै मैले सोधेँ । एक हप्तादेखि आमा निकै बिरामी हुनुहुन्छ । अङ्कललाई भेट्न आफै आउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, सक्नु भएन । उहाँले भेट्न खोज्नु भएकोले खबर गर्न आएको । फुसर्दमा एकपटक कोठामा आउन आमाले हजुरलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।” उसले मेरो घरमा आउनुको कारण प्रस्ट्याउँदै भन्यो ।
अफिसको क्लोजिङले थकित भएर म पिएर र्फकेको थिएँ । परिस्थितिलाई अरू जटिल हुन नदिन मैले उसलाई थप केही सोधिन । उनले मलाई भेट्न खोज्नुको धेरथोर कारण मनमनै अनुमान गरिसकेको थिएँ । केही हप्ता अगाडि माथिल्लो टोलमा डोकोभरी साग बोकेर डुल्दै गरेको मैले भेटेको थिएँ । त्यतिखेर छोरो बेरोजगार भएकोमा उनले गुनासो गरेकी थिइन् । दुई महिना अगाडि समीरले ज्यामी काम गर्छ भन्ने मैले थाहा पाएको थिएँ । विश्रामनगरमा बन्दै गरेकोे नयाँ घरमा उसकी बहिनीले बालुवा चाल्दै गरेकी र समीरले इँटा बोकेको मेरी जेठी छोरीले देखेर मलाई सुनाएकी थिइन् । यसैले के काम गर्दैछौ समीर भनेर मैले उसलाई सोध्ने आँटै गरिन । आज पनि ऊ कतै ज्यामी कामबाट फर्केको मैले अनुमान गरेको थिएँ ।
केही समय सोचेर मैले समीरलाई भनेँ- बाबु म भोलि बिहान आउँछु । मैले यति भनिसकेपछि चप्पल लगाउँदै उसले मलाई बिदाइको नमस्कार गर्योम । उ मूलगेटबाट निस्किएपछि मैले भनेँ- भाउजूलाई मेरो नमस्कार सुनाइदिनु । उसले टाउको हल्लाउँदै ‘हस अङ्कल’ भन्यो ।
समीर गएपछि हातगोडा धोएर मैले खाना खाएँ । त्यो साँझ मलाई टेलिभिजन पनि हेर्न मन लागेन । एउटा पार्टीको सरकार ढलेर त्यही दिन अर्को पार्टीको सरकार बनेको थियो । श्रीमती छोरा, छोरी, काम गर्ने केटो सबै बैठक कोठामा बसेर नयाँ सरकार गठन भएको समाचार हेर्दै हाँस्दै थिए ।
छोराले टिप्पणी गरेको सुनंेँ- “चुनाव हारेका पनि मन्त्री भएछन्” । समाचार सुनेर छोरो अट्टाहास हाँसो गर्दै थियो । बाबा बाबा चुनाव हारेकी ……नेताकी छोरी/श्रीमती पनि मन्त्री भएछन् समाचार हेर्न आउनुहोस् न यता, सपथ खाएको देखाउँदैछ- छोरीले चिच्याउँदै मलाई समाचार हेर्न बोलाइन् ।
नानी मेरो टाउको दुःखेको छ, म समाचार हेर्दिन । जवाफ फर्काउँदै मन मनले भने- “के हेर्नु भताभुङ्ग देशको लथालिङ्ग चाला ।”
समीरको गरिबी झल्किने लवाइ र उदास अनुहार देखेर उ गएदेखि नै मेरो मन उद्वेलित भइराखेको थियो । सम्झनाबाट हराउँदै गएका कतिपय घटना चलचित्रको दृश्यजस्तै आँखा अगाडि नाचिरहेका थिए । स्मृतिबाट हराइसकेका घटनाको नायक बनेर मेरो सामुन्नेमा- हरिबोल टुप्लुक्क आइपुग्यो ।
दस वर्षपछिको हाम्रो भेटलाई लिएर मैले खुसी व्यक्त गरेँ तर उसको अभिव्यक्तिमा कुनै उमङ्ग र उत्साह थिएन । हेराइ र बोलाइमा निराशाको भाव मात्र थियो । उसले एक्कासि मलाई प्रश्न गर्योर- अविराम के भन्न आएको रहेछ छोरो ?
हरिबोल तिमी अचानक आज कताबाट आयौ ? उल्टै प्रश्न गरेँ । उसले मसँग कसिलो हात मिलायो । दह्रोसँग हात मिलाएकोले मेरा हातका औँला नै दुःखे । कुनै समय हामी यसैगरी कडासँग हात मिलाउथ्यौँ, बानी छुटेर होला मेरो हातै दुःख्यो ।
जिङरिङ्ग कपाल, लामा दाह्री र दुब्लो अनुहारलाई पटक्कै नसुहाउने गरी, ङििचक्क हाँस्दै उसले भन्यो- “तिमीलाई नै भेट्न आएको । अँ भन त- के भेनर गयो समीरले ?” उसले पुनः उही प्रश्न दोहोर्या-यो ।
तिमीले छोडेर गएपछि विचरा टुहुरो भयो । मलाई देख्नासाथ बाबाको सम्झना आयो भन्दै डाँको छोडेर रोयो । उसलाई फकाउन मलाइ दस मिनेटभन्दा बढी लाग्यो । तिमीले परिवारको विचल्ली पारेर यसरी घर छोड्न नहुने हरिबोल क्यान्सरले पीडित भएर तिम्री आमा त्यही वर्ष बित्नुभयो । त्यसको दुई वर्षपछि तिम्रा बाबुले पनि यो संसार छोडे । त्यसपछि त उनीहरूको विजोग नै भयो नि मैले रिसाउँदै भने ।
समीरले मलाई गाली पनि गर्योय ? अँध्यारो मुख लगाएर हरिबोलले मलाई सोध्यो ।
त्यसो त उसले तिम्रो बारेमा नराम्रो कुरा केही गरेन । उसकी आमाले दुःख पाएकोमा मन अलि खिन्न पारेको थियो । उसको पछिल्लो प्रश्नको जवाफ दिँदै मैले भनेँ ।
“अविराम म देश र जनताको मुक्तिको अभियानमा हिँड्दाहिँड्दै ढलेँ । मैले व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वकाङ्क्षाको लागि कुनै काम गरिन । तसर्थ म आफू ढलेकोमा मलाई कुनै पछुतो छैन ।” हरिबोलले आफूलाई गर्व गर्दै भन्यो ।
किन पछुतो छैन ? मैले उसलाई प्रश्न गरेँ ।
हाम्रो आस्था, निष्ठा र विश्वासबाट मैले कहिल्यै तल झर्नु परेन । जुन उद्देश्यको लागि मैले यात्रा गरेको थिएँ, त्यही बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै म ढलेँ । त्यसैले मलाई गर्व छ । मेरो छोरो कुनै दिन तिमीलाई फेरि भेट्न आयो भने सुनाइदिनु- “जीवनको अन्तिम क्षणसम्म मुक्तिको आन्दोलनमा निष्ठापूर्वक म अडिग रहेँ ।”
तिमीलाई के फाइदा भयो ? यो त अभिमानी कुरा भएन र ? मैले झोक्किदै प्रश्न गरेँ ।
“मेरो स्वाभिमानलाई अभिमान नसम्झ । स्वाभिमानलाई नबुझ्दा अभिमान हुन्छ । ” अविराम राम्रोसँग सुन- “राजनीति व्यापार होइन । यसमा नाफा र नोक्सान हुँदैन, त्याग र बलिदान मात्र हुन्छ ।” उसले गर्व गर्दै भन्यो ।
वर्तमान राजनीति तिमीले भनेजस्तै निःस्वार्थ र नाफारहित छ ?
यो प्रश्नले हरिबोल अलि ओइलायो । उसले लामो सास फेर्योा र उदास अनुहार पार्दै भन्यो- “तिमी वर्तमान नेपालका नेताहरूलाई खुइल्याऊ, होच्याउ, ताछ जे गर त्यो तिम्रो इच्छा र अधिकार हो, किनकि तिमी सार्वभौम सम्पन्न नागरिक हौ । तिम्रो चेतना र बुझाइअनुसार टिप्पणी गर तर मलाई अरूसँग नदाँज । हेर मैले बाँचेर मर्नु परेन र तिम्रो आँखाबाट खस्नु पनि परेन । यसैले मलाई गर्व छ” ।
जेलबाट छुटेको दिन तिम्रो बाले कसैलाई पनि नभन्नु भन्दै हामीलाई भन्नुभएको
गोप्य कुरा तिमीलाई सम्झना छ कि छैन ? हरिबोल मैले उसलाई गम्भीर भएर प्रश्न गरेँ ।
“सम्झना छ मलाई ती कुराको राम्रो सम्झना छ । बाले सुनाउनु भएका तिनै कुराले तिमीले राजनीति छोड्यौ मैले घर छोडे”- उसले अलि चर्को स्वरमा भन्यो ।
आश्चर्यको कुरा गर्यौघ नि उहाँको तिनै कुराले घर छोडेको हो र ? मैले उसलाई खोतल्दै पुनः प्रश्न गरेँ । “मलाई पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन्न उहाँले बताएका घटनाले उत्प्रेरित गरायो । वर्गशत्रु र वर्गमित्रु छुट्याउन सजिलो भयो । उहाँले भनेका तिनै कुराले सामन्तवादको मूल नाइकेप्रति घृणा र प्रतिशोधको आगो छातीमा दन्कियो र म भूमिगत भएँ ।” उसले कोठाबाट निस्कँदै हतारहतार भन्यो ।
किन चट्पटाएको हरिबोल ? केही समय त बस । हरिबोल… हरिबोल
निद्रामा च्याठिँदै कराएको सुनेर श्रीमतीले घचघचाइन् र म बिउझिएँ । बिहानीको साढे चार बजेको रहेछ । सपनामा हरिबोललाई देखेको र उसँग भएका कुरा श्रीमतीलाई सुनाएँ । “सपनामा मरेको मानिससँग कुरा गरेको राम्रो होइन” भन्दै श्रीमती उठेर बाथरुमभित्र पसिन् ।
देब्रे कोल्टो सुतेको रहेछु । बिऊझिएपछि दाहिने कोल्टो फर्किएँ । उठ्न मन पटक्कै लागेन । आँखा चिम्लिएर सुतिरहेँ । दिमागमा अनेकौँ घटनाका दृश्य र तरङ्ग उठे । अञ्चलाधीश कार्यालयमा ३५ वर्ष जागिर खाएर छोडेका हरिबोलको बाबु श्यामबोललाई सम्भिmएँ । २०४६ सालमा जेलबाट छुटेको दिन उनले आˆनो कोठामा चुकुल थुनेर हामीलाई बताएका गोप्य कुरा सम्भिmएँ ।
“अविराम बाबु तिमीहरूले देशको राजनीति पटक्कै बुझेका छैनौ । राणाशासन फालेर चुनाव जितेका वी.पी., गणेशमान, तुलसीलाल, पुष्पलालले त यो देशमा केही गर्न सकेनन् । तिमी र हरिबोलले के गर्न सक्छौ ?”
किन र बुबा ? मैले प्रश्न गरेँ ।
उनले मसिनो आवाजमा हाम्रो कान नजिकै मुख जोडेर भनेका थिए-“चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनेका नेताहरूलाई जेलमा कोच्दा कसैले चुइक्क बोल्न सकेन । विचरा नेताहरू कयौं वर्ष जेलमै सडे । १७ साल काण्डको चर्चा नहोस् भनेर १८ साल माघमा ज्योतिषहरूबाट भूकम्प आउँदैछ भन्ने हल्ला चलाइयो । खुल्ला चउर र बारीका पाटामा छाप्रा बनाउनु र हरिकीर्तन गरेर बस्नु भन्ने माथिको आदेश लिएर म चार जिल्लाको दौडाहामा गाउँगाउँ खटिएको थिएँ । मेरो साथमा चार जना पुलिस, एक जना हवलदार र मुखिया पनि थिए “।
बोल्दाबोल्दै उनले लामो स्वास फेरे । डराएर थरर्र काम्दै झ्याल बाहिर कसैले सुनेको छ कि भनेर चियाएर पल्याकपुलुक हरेर झ्यालका सबै पर्दा लगाएँ । अगिको भन्दा पनि मसिनो आवाजमा उनले भनेँ-“१७ सालको काण्डलाई छायाँमा पार्न भुइँचालोको हल्ला चलाएका थिए । राजनीतिको चर्चा नहोस् भनेर शासकहरूले जनताको ध्यान अन्यत्रै मोडेका रहेछन् । यो कुरा पछि मलाई थाहा भयो ।”
जनताले यस्ता कुरामा विश्वास गरे त ? उनी बोल्दाबोल्दै मैले बीचमै प्रश्न गरेँ ।
“रैतीहरूको माया र चिन्ताले सरकारले हामीलाई गाउँगाउँमा बुझ्न पठाएको खबर थाहा पाएर जनताले सरकारको जयजयकार गरे । खुसीले गद्गद् भएर बारीका पाटामा छाप्रा बनाएँ ।” उनले अलि ठूलो स्वरमा भने- “सरकारको नक्कली सन्देश लिएर चार जिल्ला घुम्न हामीलाई ठ्याक्कै ४५ दिन लाग्यो ।”
कुरा गर्दागर्दै बसिरहेको ठाउँबाट उनी जुरुक्क उठे । पर्दाको होडे परेको भागबाट बाहिरको चाल बुझ्दै पल्याकपुलुक हेरे । “हेर बाबु हो चानचुने मानिसले राजनीति जान्दैन र बुझदैन” उनले हाम्रो कानमै मुख जोडेर साउतीको स्वरमा भने- “३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा पूर्वको क्याम्पमा बसेर मैले तीन दिन तीन रातसम्म निर्दलमा छाप लगाएँ । त्यसरी छाप लगाउने अरू पनि दुई जना थिए । त्यसै हारेको छ बहुदलले ? त्यसै जितेको छ निर्दलले ?”
उनले अलि अँध्यारो मुख लगाउँदै भनेका थिए- “बाबु हो यो कुरो तिमीहरूले बाहिर कतै, कसैलाई भन्यौ भने मेरो पेन्सन खोसिन्छ । त्यति मात्र होइन हातगोडा बाधेर मलाई नारायणीमा फालिदिन्छन् । के बुझेका छौ तिमीहरूजस्ता उरन्ठेउलाहरूले राजनीति ?”
“ल हेर हेर ६ बजी सक्यो अहिलेसम्म सुतिरहेको । नराम्रो सपना देखे भनेको होइन ? नुहाएर पीपलमा पानी चढाएर आउनुहोस् । शनिबार पीपलमा पानी चढाएर दर्शन गर्यौा भने दिनदशा बिगि्रएका रहेछन् भने पनि टरेर जान्छन् ।” श्रीमतीले कचकच गर्दै मलाई आदेश दिइनँ ।
मन भारी भएको थियो । बिछौना छोड्न पटक्कै इच्छा थिएन । शरीरमा अघिपछिको जस्तो फूर्ति पनि थिएन । आलटाल गर्दै उठेर नित्य कर्म सकेर नुहाएँ । श्रीमतीले चिया दिँदै फेरि कराउँदै भनिन् -“खुरुक्क गएर पीपलको बोटमा पानी चढाएर आउनुहोस् ।” मैले हुन्छ भन्दै टाउको हल्लाएँ ।
कोठाबाट निस्कँदै श्रीमतीलाई भने – म र्फकदा अलि अबेर हुनसक्छ नयाँ बस्ती गएर आउँछु ।
के काम छ ? उनले झोक्किदै सोधिन् ।
हिजो साँझ हरिबोलको छोरा समीर आएको थियो । उनकी आमाले मलाई भेट्न खोजेकी छन् भन्दै थियो । बिरामी परेर ओछ्यान परेकी छन् रे भेट गरेर आउँछु मैले प्रस्टीकरण दिएँ । “ए…कठैबरा ” श्रीमतीले लेब्रो तान्दै भनिन्- जानोस् जानोस् बिरामीलाई भेट गरिहाल्नुपर्छ । विचरा हरिबोलको हत्या भएको कति वर्ष भयो ? उनले दोहोर्यााएर सोधिन् ।
यसरी सोध्नुको कारण थियो- कुनै समय उनीहरू कलेजका सहपाठी थिए । हरिबोल विद्यार्थी युनियनको सभापति हुदा मेरी श्रीमती जया कोषाध्यक्ष थिइन् । भूमिगत पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनको उतिखेर जया क्रान्तिकारी नेता नै थिइन् ।
उनले फेरि सोधिन् – कति वर्ष भयो हरिबोल बितेको ? पाँच वर्ष पुग्नै लाग्यो- मैले कपडा फेर्दै भने ।
“देश र जनताको लागि भनेर दुनियाँका छोराछोरीले बलिदान दिए । स्वार्थी र लुच्चा नेताहरूले त्यही बलिदानमा मोज गरे । विचरा सहिद परिवारको विचल्ली भयो । तै हामीले समयमै राजनीति छोडेछौँ ।” उनले वर्तमान राजनीतिको टिप्पणी गर्दै भनिन् । म कोठाबाट निस्कँदै थिएँ । एकैछिन पर्खनुहेास् है भन्दै उनी कोठाभित्र पसिन् । ए अलि चाँडो गरन मलाई ढिलो भइसक्यो । मैले झोक्किदै कराएपछि मेरो हातमा एउटा झोला थमाउँदै उनले भनिन् -“यसमा मेरा पुराना धोती, चौबन्दी चोला, ब्लाउज र हजुरका पुराना सर्ट पाइन्ट छन् । समीरको आमालाई लगेर दिनुहोला । आफू अब कýुर्था र पाइन्ट लगाउन थालियो यी कपडाको के काम ? मोटाएर लगाउनै नहुने भए ।”
श्रीमतीले थमाइदिएको झोला च्यापेर म चुपचाप समीरको घरतर्फ लागेँ । मूल सडकमा पुगेपछि चुरोट सल्काएँ र नयाँ बस्तीतर्फ लम्किए । करिब ३५ मिनेट लाग्ने बाटोमा चुरोटको धुवाँ उडाउँदै म एक्लै हिँडिरहेको थिएँ । फेरि मन अतितमा रूमलिन थाल्यो । आˆनो पालाका जल्दाबल्दा, समाजमा अब्बल प्रतिष्ठा र प्रभाव जमाएका सुब्बा श्यामबोलको विगठित परिवार र अतितको सम्झनामा चुर्लुम्मै डुबेँ । घर परिवारमा बढेको जेठोबाठो छोरोले लत्तो छोडिदिएपछि र परिवार सम्हाल्ने अरू कोही नहँुदा सम्पन्न परिवार विघटन हुन कति समय लाग्दोरहेछ र ? निर्माण हुन मात्र समय लाग्छ, भत्किन र बिग्रन त कुनै समय नै लाग्दो रहेनछ ।
मैले पुनः अर्को चुरोट सल्काएँ ।
हरिबोल भूमिगत भएर हिँडेपछि सुब्बा साबले मलाई बोलाएर भनेका थिए- “बाबु अविराम अधर्म गरेर मैले कहिल्यै सम्पत्ति कमाइन । पसिनाको आर्जनले दुई छोरीको बिहा दान गरेँ । श्रीमतीको क्यान्सरको उपचार र छोराको लेखाइ, पढाइ र बिहादानले म त थला नै परंँ । अब त छोराले पढाइ सक्यो जागिर खाला र कमाएर घर व्यवहार हेर्ला भन्ने सबै सपना भताभुङ्ग भयो । जे भए पनि छोरो देश र जनताको मुहार उज्यालो बनाउँछु भनेर लागेको छ । कतै उसको सपना पूरा होला कि भन्ने पनि यो मनमा लागेको छ । कुनै दिन आउला घर परिवार र व्यवहार सम्हाल्ला भन्ने झिनो आशा यो मनमा अझै बाँकी छ बाबु तर के गर्नु आफूलाई अहिल्यै चोट्टे परिसक्यो ।
Posted in Atmaram Sharma
Tagged Atmaram Sharma - Bighatit Sapana Atmaram Sharma's Nepali Story Bighatit Sapana Literary work of Nepali Story Writer Atmaram Sharma Literatures of Nepali Story Writer Atmaram Sharma Nepali Author Atmaram Sharma Nepali Katha Nepali Katha Bighatit Sapana by Atmaram Sharma Nepali Kathakar Nepali Kathakar Atmaram Sharma Nepali Rachanakar Kathakar Atmaram Sharma Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Atmaram Sharma Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Atmaram Sharma Nepali Story Nepali Story Bighatit Sapana by Atmaram Sharma Nepali Story Blog Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Atmaram Sharma Sahityakar Atmaram Sharma Ka Nepali Katha Haru